ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သင်ချိုးနှင့်အဝေးကွင်း မှစ. run သင့်ချိန်းတွေ့မညီကြောင်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 14 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးချိန်းတွေ့မညီကြောင်းဆင်း bogged ရပါမည်? မကြာခဏဆိုသလိုအဲဒီမညီကြောင်းညာဘက်အချိန်တွင်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဖြတ်ပြီးလာမယ့်ထံမှလူကိုရပ်တန့်; အုပ်စုခွဲ ups နှင့်ကွာရှင်းဒီလိုတိုးမြှင့်မှုနှုန်းနှင့်အတူ, ဒီရုံ unpardonable ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်, သင်ကနေ့စွဲအပေါ်ထွက်မသွားခင်လုပ်သင့်ကိုပထမဦးဆုံးအရာကအဲဒီမညီကြောင်းကိုချိုးဖောက်သည်. ဒီနေရာတွင်ဖယ်ရှားပစ်ရသင့်တယ်တချို့ချိန်းတွေ့မညီကြောင်းများမှာ.
1 Oh! ထိုလူကိုအကောင်းကြည့်, အကြှနျုပျမူကားထက်အများကြီးတိုတောင်းသည်.
အမြင့်၌အဘယ်အရာကိုဖွင်? ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်ဆံရေးသည်လူကိုထိုမိန်းမသည်ထက်တိုတောင်းလို့မှားသွားနိုင်ပါတယ်? အဲဒီအစားလူတစ်ဦး၏အမြင့်အပေါ်စစ်ဆေးနေ၏, သင်သည်သူ၏ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးဂရုစိုက်သင့်, လူ, ပညာရေးနှင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်. ၏သင်တန်းကိုသင်တို့သည်ကောင်းသောရူပနှင့်တက်ကြွတူပိုရေပေါ်ဆီအရည်အသွေးတွေကိုသွားနိုင်ပါတယ် (သူတို့အားဆိုးကြိမ်ဟုတ်ကဲ့), ဒါပေမယ့်လူတဦး၏အမြင့်အပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချရုံကတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး.
ဤအထူးချွန်ဆုံးနဲ့ငြိမ်ဆုံးပဲအမျိုးသမီးအချို့ပင်နှောင့်နှေးသောသူတယောက်ချိန်းတွေ့မညီကြောင်းဖြစ်ပါသည်. ဒီမညီကြောင်းတကယ်တော့အမျိုးသမီးများစိတ်ချယုံကြည်ချိန်းတွေ့ကြိုက်တတ်တဲ့အကြံပြုတဲ့ဒဏ္ဍာရီမှအဓိကအား, သွားလာရင်း-getters နှင့်အမျိုးသားများနေသောခွန်အားကြီးသောသူတို့ကိုခိုင်ခံစားစေတော်မူသောအမျိုးသမီးများကပိုမိုလွယ်ကူစွာဆွဲဆောင်နေကြတယ်, စိတ်ချပြီးသွား-လာပြီ. ဒါဟာကိုယ့်အမှိုက်ဖြစ်ပါသည်.
လူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆရန်လုံးဝမှားဒါဟာင်. များစွာရှိပါသည်, နှင့်ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်ငြင်းပယ်ခံရ၏ပြင်းထန်ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်များစွာသောသောမိန်းမတို့ကိုအထဲကဘယ်တော့မှမမေး; အမျိုးသမီးများအမြဲတမ်းသူတို့ကိုထွက်သို့မဟုတ်လိင်ကိုတောင်းဆိုနေတာပါစေသတည်းပထမဦးဆုံးအစပြုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်. ဤ, သို့သော်, အဘယ်သူမျှမအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်ကြီးစွာသောဘဝလက်တွဲဖော်များဖြစ်သို့မဟုတ်မနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထူထေ​​ာင်ခြင်း (သင်ကဝေးမကြည့်ကြဘူးဆိုရင်) ချိန်းတွေ့အိမ်ထောင်ဖက်.
3 သူကဥပဒေကြမ်းခွဲထွက်ရန်ငါ့ကိုတောင်း; သူအမျိုးသမီးများအတွက်အမှန်တကယ်ရိုသေလေးစားမှုရှိရမည်.
မလိုအပ်; သူ့ရဲ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချပြဖို့အခွင့်အလမ်းပျောက်ဆုံးနေထက်အခြား, ယောက်ျားတစ်ဦးမှာသဘာနှမြောဆန္ဒပြတက်အဆုံးသတ်ဥပဒေကြမ်းခွဲထွက်လိုသောအားဖြင့်. ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားမှပယ်ရှား Stay.
4 ဒါဟာကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲင်; အဘယ်သို့ငါလိင်ရှိသည်နိုင်?
ထိုမိန်းမတို့သည်ကြီးစွာသောဆက်ဆံရေးကိုတစ်ဦးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းမီးပွားသို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒနှင့် ပတ်သက်. မကြာခဏဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိနေရမယ်. သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်လိင်ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့, သင်သည်အလွယ်တကူဖြစ်လာမ. ပထမဦးဆုံး-date ဖြစ်အောင်အပေါ်လိင်ကောင်းစွာသင်နှင့်သင့်အသစ်ချိန်းတွေ့အိမ်ထောင်ဖက်အတူတကွယ့်ကိုကောင်းစွာ gelling တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
5 အဲဒီကောင်လေးတော်တော်ဖြားယောင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သူကျနော့်မိတ်ဆွေကယ်.
အဆိုပါမညီကြောင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုရင်ခုန်စရာမကြာခဏကြောင့်ငြူစူသောစိတ်တူအချက်တွေခဏတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်, စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း, မျက်နှာသာပေးမှုနှင့်အတင်းအဖျင်း. သူတို့တစ်တွေပြိုကွဲသူတို့အဘို့အအလုပ်ခွင်မှာဘဝလုံးဝစိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းငှါထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံအဖြစ်လူအတော်များများကလည်းကွာထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံမှုမှနေပါပြီ.
တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမညီကြောင်းဖယ်ရှားပစ် Get. ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းအကောင်းဆုံးအရာကိုသင်တို့နှစ်ဦးသည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနဲ့အချိန်အများကြီးဖြုန်းရဖြစ်တယ်; သင်သည်အလုပ်နှင့်မှအတူတူသွားလာနိုင်ပါတယ်, သင်အတူတကွသင့်နေ့လယ်စာရှိသည်နိုင်, ရုံး get-အတူတကွအတွက်ဤမျှအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ. ပဲသေချာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွဲပြားချက်စေ (တယောက်မျှမရှိင်သည့်အခါ) အလုပ်မထိခိုက်စေပါဘူး.
တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါအဲဒီမညီကြောင်းကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါခွင့်ပြုဘယ်တော့မှမ. ထိုသို့ပြုခြင်းကသာသင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို ပို. စောင့်ဆိုင်းဖြစ်စေမည်.